Guyyaa haadholii – Mother’s day – Awash Times
Guyyaa haadholii – Mother’s day
February 8, 2020 Malka Wabe Uncategorized Leave a comment
Guyyaan hadhooli kan kabajamu hadhooli yaadachuufi. Guyyaan hadhoolii kun biyyoota adda addaa keessatti guyyaa adda addaatti kabajama. Biyya Norway keessatti fakkeenyaa ji’a guraandhaala keessatti dilbata torban lamaffaatti kabajama. Kan bara 2020 guraandhala 09. bara 2020 kan kabajamu yoo ta’u, biyoota biraa keessatti fkn USA fi biyyoota biroo biyya keenyas dabalate ji’a caamsaa keessatti gaafa 10 bara 2020 tti kabajama.
Guyya hadhoolii kabajun yoomifi eessatti jalqabame?
Seenan akka himutti guyyaan kun bara 1908 camsaa 12 mana amantii metodist magaalaa Crafton fi Philadelphia, West- Virginia biyya USA kabajamu jalqabe. Tattaafi barsistuu Anna Marie Jarvis (1864-1946) hadha ofi Anna Maria Reeves Jarvis (1832-1905) yaadachuuf gooteen jalqabame. Haatii ishii dubartoota biraa waliin ta’udhaan dubartoota yeroo Amerikaan waraan keessa turte bara (1861-65) hirmaatanif gargaarsa adda addaa akka argatan hojjachaa ture. Erga waraan dhaabateen boodaf dubartiin tun nagaadhaaf hojjachaa turte.
Yeroo gabaabaan booda magaaloota biro keessattis guyyaan kun kabajamu jalqabe. FKN bara 1910 keessatti magaaloota baay’etu biyya USA guyyaa kan kabajan. Bara 1912 tii akka adunyaattitti guyyaan kun akka kabajamuf dhaabbani tikko ijaarramee socha’u jalqabe.
Bara 1913tti kongransiin biyya Amerikaa ayyaani kun ji’a caamsaa torban lammaffaa gaafa dilbataa akka kabajaamu yaada dhiheesan. San booda bara baraan akka ayyaani kun guyyaa kanatti kabajamuf murtaa’e, kabajamu jalqabe.
Ayaanni kun biyya Norwaay keessatti bara 1919 ji’a guraandhala keessatti kabajamu jalqabe. Waggaa 100 tokko dura.
Akkaata guyyaa hadhooli kabajan
Ayyaani kun dur kabajamu yoo jalqabu mana amantaa keesatti kabajamaa ture. Bodaratti garu ayyaana maatii tu’udhaan maatii waliin manatti kabajun jalqabame. Ayyaana kana waan hadha gammachiisu godhuudhaan kabaju.
Fkn:- Nyaata hojjatani hadha afeeru, kennaa adda addaa keenudhaan
Ijoolleen yaaddannoo adda addaa hadhaa qopheesudhaan :- fkn sirba, fakki kaasudhaan fi kkf
Madda odeeffannoo -‘
Store norske liksikon
Previous Post: Filannoof hojjettoota mootummaa
Next Post: Akkaataa Waaqeffattoonni itti jiraatan Gaazexaan biyya Norway barreesse